आज यातायात ठप्प, क–कसले चलाउन पाउँछन् सवारीसाधन ? « Lalitpur Khabar
आज यातायात ठप्प, क–कसले चलाउन पाउँछन् सवारीसाधन ?
३० वैशाख ०७९, काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनको दिन आज निजी तथा सार्वजनिक यातायात ठप्प छ । सरकारले सबै प्रकारका यातायात बिहान ६ बजेदेखि मतदान नसकुन्जेलसम्मका लागि बन्द गरेको हो । आज सार्वजनिक बिदा पनि हो ।